အခုလေးတင်သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်ရတယ် မြန်မာနေးရှင်းဂျာနယ်ရဲ့အယ်ဒီတာနဲ.မန်နေဂျာကိုဖမ်းသွားတယ် ဆိုတဲ့သတင်းပါ။မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဖတ်တိုင်းစိတ်ချမ်းမြေ့စရာမရှိပါ ၊ တလောကလေးတင် ကဗျာဆရာကိုစောဝေနဲ့ ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်တို့ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။သတင်းစာဆရာကြီးဦး ၀င်းတင်ဆိုအသက်၈၀နား နီးနေတာတောင် ထောင် ထဲကမထွက် ရသေးပါ။
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူ့နား၊ ပြည်သူ့မျက်စိပင် ဖြစ်ပေသည် ယခုလို ဖမ်းဆီးထောင်ချ နေခြင်း သည် ပြည်သူ့ နား မျက်စိ များ အားထိုးဖောက် နေခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည် ။သက်ဦးဆံပိုင်ခောတ် ကပင် မင်းတုန်းမင်း က သတင်းစာဘိုးအေကြီးဘိုးဝဇီရအား ငါမကောင်း ရင် ငါ.ကိုရေး ၊မိဖုရားခေါင်ကြီး မကောင်းရင် မိဖုရားခေါင်ကြီး ကိုရေး၊မှုးကြီး မတ်ကြီး မကောင်းရင် မှုးကြီး မတ်ကြီးတွေကို ရေး မောင် မင်း အပြစ် မဖြစ်စေရ ဟု သတင်း စာလွတ်လပ်ခွင်.ပေးဖူးပါသည်။
တစ်ကယ်တမ်း တိုင်းပြည် တိုးတက်စေချင်လျှင် မင်းတုန်းမင်း ကြီးကဲ့သို့ ပင် လွတ်လပ်ပွင်.လင်းသောသဘောထားမျိုးထားရှိရပါမည် ။ယခုတော့သူတို့သဘောထားများမှာ အလွန်သေးသိမ်လွန်းလှသည် ၊အယူ အဆမတူလျှင် ရန်သူဟုသဘောထားကာ မဲမဲမြင်ရာစွတ်ရွတ်ဖမ်းသည်
လူငယ် အစ ၊အဖိုးကြီးအဆုံး မည်သူမှချမ်းသာမပေးပေ ပြည်တွင်းမှ စာနယ်ဇင်းသမားများ ဘ၀က ဆူးကြားကဘူးခါးဘ၀ပင်။
ဒီနေရာတွင်မေးခွန်းထုတ်စရာက စာစောင်တစ်စောင်၏ တာဝန် အရှိဆုံးသော အယ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးမှာမည်သည်ကြောင့်လွတ်နေပါသနည်း။
ကဲနောက်တစ်ခါ ဘယ်သူ့အလှည့်လဲ .................?
Posted by phone myint at 4:24 PM
မန္တလေး ရတနာပုံ ဈေး မီးလောင် မှု ဓါတ်ပုံများ
နေဘုန်းလတ်သို့ …. ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမတွေ အကြာ...
ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၈ ) - "ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ" "ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ" "ပြည်တွင်းစစ် အနှစ် ခုနစ်ဆယ်၊ တော်ပြီ" မရပ်နဲ့၊ အဲဒီ အော်သံတွေ မရပ်နဲ့။ လက်...
အဘမွေးနေ့အတွက် - အဘမွေးနေ့အတွက် ကျနော်ကတော့ သူ့ကို ချစ်စနိုးနဲ့ အဘလို့ ခေါ်တယ်။ အဖေအရွယ်၊ ဦးလေးအရွယ်မို့လို့ အဲလို ခေါ်တာပါ။ စိတ်ထဲမှာတော့ အကိုတယောက်လို သဘောထားတယ်။ ဘာလို့...
သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ ချည်တဲ့ကြိုး (၂) -